Tuesday, 11 Jul, 2017 12:59 PM
प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेल । ढिलै भए पनि तराइ मधेसमा राष्ट्रवादको तरल तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मधेस र मधेसी विरोधी भनेर लगाइएको भड्काव मधेसमा नै खण्डित हुन थालेको देखिन्छ । झुटो ट्क्दिैन भनेझैँ तराइमा भुइँतहमा घनीभूत रुपमा छरिएको एमाले केन्द्रित फरेबहरु अब जमिन तहबाट फाट्दै गएको यथार्थ भनेकै दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणाम हो । तराई मधेसमा राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत तराई मधेस केन्द्रित पार्टीका प्रमुख नेता र नेतृहरुको एमाले पार्टी प्रवेशबाट पनि तराई मधेसका जनता एमालेप्रति आकर्षित छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । एमाले पार्टी प्रवेश गर्ने नेताहरुका वक्तव्य र विचारहरुबाट मधेसको मनोविज्ञानलाई स्पष्ट संकेत गर्छ । देश,जनता र जनजीविकाका सबालमा एमाले प्रतिबद्ध भएकाले देशी विदेशी शक्ति,स्वार्थ र प्रवृत्तिहरु एमाले विरुद्ध चौतर्फी आक्रमण गरिरहेको भए पनि त्यहाँको जनताको स्वाभिमान र राष्ट्रियताप्रतिको अडान नै एमाले विजयीको आधार हो । एमाले पार्टीसित राष्ट्र निर्माण र विकासका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सबालमा आलोचना गर्ने कुनै विषय नपाएपछि तिनले विगतमा एमालेको नौ महिने सरकार बन्दा बुढाबुढी मारिन्छन्, भारतबाट नुन तेल बन्द हुन्छ भनेर अफवाह फैलाएझैँ अहिले नयाँ फजुल विषय र मुद्दा उठाएका मात्र हुन् । वास्तविकता के हो भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन् ।
मधेसमा ओलीलाई खोक्रो, पहाडे, सामन्ती राष्ट्रवादको बिल्ला भिराउन पनि खोजे । ओलीले छिमेकी राष्ट्रले विभिन्न खालको सरसहयोग गरेको छ भनेका आधारमा घर परिवार नै त छिमेकीलाई जिम्मा लगाउन सकिँदैन भन्ने तर्क निकालेका थिए । भारतीय नाकाबन्दी,नेपालले संविधान बनाउँदा रिसाएको भारत प्रायोजित एकाध मधेसी नेतालाई निमित्त बनाएर सुरु गर्न खोजिएको विभाजनकारी वितण्डा अहिले निक्कै मत्थर भएको देखिन्छ र यसले अब पहिले छरिएका एमाले विरोधी भ्रमका काला र घना बादल हट्न थालेको स्पष्ट हुन्छ । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले एमाले नीति र एजेण्डा जन अनुमोदित भएपछि एमाले पार्टी र ओली प्रभाव देशभर बढ्दैछ । यस बीचमा राजपा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष अनिता यादवले पार्टी प्रवेशका क्रममा एमाले पार्टी र यसको नेतृत्वमा बनेको ओली सरकारका तराइमधेस मैत्री बजेटलगायत कुराबाट प्रभावित भएको बताएकी छिन् । अझ नेपालको संविधानका अनेक सकारात्मक पक्षका विरुद्ध भारतीय संसदमा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले नै पनि नेपालको संविधान विरोधी फरेब र भ्रमपूर्ण पुलिन्दा खोलिन् र यस अफबाहलाई मधेसी जनताका बीचमा व्यापक रुपमा छरियो । नेपालको तराइमधेसमा त संविधानले गर्दा हामी मधेसीहरु अपने अँगनियाँ मे हो गइल परदेशिया अर्थात् हामी हाम्रै आँगनमा परदेशी हुनेभयौँ भन्ने खालका स्थानीय भाषाका गीतहरु टोलटोल र गाउँगाउँमा घन्काएर आम जनतालाई कुहिराको काग बनाएको कुरा एमाले मेची–काली जागरण अभियानबाट फाट्यो ।
यसै हुनाले राजपा महामन्त्री समीम मियाँ अन्सारी,पारोदेवी यादव,सुखाराम यादव,सुरेश सिंह र हेम शंकर सिंह र अनिल सिंहहरु निशर्त एमाले प्रवेश गरेको हो । मैथिली भाषी वरिष्ठ सर्जक रमेश रन्जन झा राष्ट्रवादी भावनाका विपरीत मधेसका भुइँतहका छरिएका तमाम फरेबबाट आजित भएको बुझिन्छ । एमाले प्रवेश गर्नेमा माओवादी केन्द्रका नेता डा. नवीन यादव र नेकाका नेता धनबहादुर राई धरान समेत छन् ।
के भन्छन् बुद्धिजीवी ?
प्राध्यापक जुगेश्वर साहले मधेस र पहाडको समानतामूलक विकास हुँदैन तवसम्म समृद्ध नेपाल हुन नसक्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । प्रसिद्ध अधिकारकर्मी आभासेतु सिंहले अङ्गीकृतलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने कुरा हुनै नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । एमाले राष्ट्रियताका पक्षमा उभ्भिएको छ, यो पार्टी मधेस विरोधी हुनै नसक्ने निष्कर्ष तराईमधेसका बुद्धिजीवीहरुको छ । प्राध्यापक अमरकान्त झाले देश जातीय द्वन्द्वतिर बढ्दै जानुलाई चिन्ताजनक स्थिति भनेका छन् । भारतीय पक्षबाट सीमावर्ती ठाउँहरुमा मधेसी भूभागहरु डुवान हुने गरी बनाउन खोज्दा एक्लै भए पनि जुध्न तयार देवनारायण यादव, तिलाठी घटनाका अगुवा, अरु बेला सदन बहिष्कार गर्ने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भोट हाल्न जाने मधेसीहरुले आफ्नै खुट्टामा उभिएर लिने कुरा लिने र छाड्ने कुरा छाड्ने गर्नुपर्छ । फोरमका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रेश्वर महतो, चुनावमा भाग लिएर प्राप्त उपलब्धि जोगाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्छन् । मिथिला नाट्य परिषद्का पूर्व अध्यक्ष सुनील मल्लिक, द्वन्द्व बढ्दा जो मरे पनि नेपाली मर्ने हो भन्ने मार्मिक तर्क अघि सार्छन् ।
राजविराज स्थित महेन्द्र विन्देश्वरी क्याम्पस प्रमुख, सर्वेशचन्द्र मिश्रले पक्षविपक्षका दलहरु स्वतन्त्रता,अखण्डता, र स्वाधीनतालाई मूल मन्त्र मानेर एक ठाउँ बसे नमिल्ने कुनै समस्या रहेको उल्लेख गर्छन् । मैथिली भाषाकर्मी करुणा झाले मैथिली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनेमा कथित मधेसी नेताहरुको कुनै ध्यान नभएको बताएका छन् । उपप्राध्यापक बन्दना मिश्रले मैथिली भाषालाई मान्यता दिइनुपर्छ, नेपालको मल्लकालमा पनि मैथिली राष्ट्रिय भाषा रहेको पत्रिकामा उल्लेख छ । यसरी एमाले विरोधी भं्रमपूर्ण घनाअन्धकार तराइ मधेसमा फाट्न थालेको देखिन्छ । करीव एकवर्षको राष्ट्रव्यापी अन्तक्रिया, छलफल, बहस र विमर्शका कारण भारत प्रायोजित नेपाल र नेपालीलाई अनेक हिसावले विभाजनकारी कृत्यको पोल खुलेको छ । तराइमधेसका सचेत आँखाहरु पनि खुल्न, देख्न र व्युँझिन थालेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी मधेसको एक अमुक प्रमुख नेतामा राष्ट्रवादी चेत,चिन्तन र चरित्रको विकासले त्यहाँको सिङ्गो गाउँ,नगर र जिल्ला प्रभावित हुन्छ र गर्नुपर्छ । तर यत्तिकै भरमा यो चेतनाको चिन्गारीलाई बारबार फुकिरहनु पर्छ । यसका लागि नेपाल जस्ता मुलुकहरु विदेशी दसतामा कसरी पर्न सक्छन् ? यस सम्बन्धी तथ्य, सत्य र यथार्थ विषय वस्तुलाई एउटा गहकिलो सामग्री निर्माण गरेर अहिले तरङ्गित राष्ट्रवादी लहरलाई सशक्त र सबल बनाउनु पर्छ । गर्दा हुन्छ । नेतृत्व भनेकै अनेक प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने महान् क्षमता हो, असम्भव भनिएका र ठानिएका विषय र विचारलाई सम्भव बनाउनु हो । विचार, सिद्धान्त र मान्यता सही लिने तर त्यसलाई मिहेनत गरेर लागु गर्नु र गराउनु नै नेतृत्वको महानता र बुद्धिमत्ता हो । तर अधिकांश एमाले पार्टी पङ्ति र नेतृत्वमा जबज अनुसारको चरित्र एकदम अपर्याप्त देखिन्छ । जनताको मन जितेर नेतृत्व हासिल गर्ने नीति पार्टीको छ । तर अधिकांश नेता प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा मन बिझाउने र घोच्ने स्वभावका देखिन्छन् । यही स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीको केही नहुँदा पनि मिलनसारिता, हार्दिकता र जनता मैत्री व्यवहारका कारण विजयी भएका देखिन्छन् । एमाले पार्टीमा पार्टीगत सबकुछ छ तर, लोकप्रिय, मिलनसार र मिजासिलो बेहोराका अभावमा पनि हार्न पुगेका छन् ।